Isagu waa Ilaaha Afrikaanka, laakiin isagu ma ahan Afrikaan. Isagu waa Ilaaha reer Kongo, laakiin isagu ma aha reer Kongo. Isagu waa Ilaaha dagaalyahannada, laakiin isagu ma aha comba ... Akhri wax dheeraad ah
Xaqiiqdii waxay noqon lahayd mid la yaab leh in la qiyaaso in nin cadaan ah uu soo gabagabeeyay magaciisa oo loo yaqaan "midnimada ergada", isaga oo ka saarey "culays". ... Akhri wax dheeraad ah
BENJAMIN YEYA, oo loo yaqaan 'ANDELE MABOKE' oo magiciisa u leh kooxahaas tiyaatarka caanka ah, wuxuu ka mid ahaa marti-geliyayaal raadiyeyaal ah oo qayb ka ahaa guutada SKETCH ee RTNC ee '... Akhri wax dheeraad ah
Maansada "Ma cabi karo hadda" kooxdii Zouglou Revolution. Akhri wax dheeraad ah
Trump wuxuu sameeyaa sumcad wanaagsan! Kumaa u maleyn lahaa inuu ka ciyaarayay garoonka Prince de Bel air… Mareykankuna wuxuu sameeyey xUQUUQDA !!! Hilary hubaal wuu naga kaxayn lahaa ... Akhri wax dheeraad ah
Baarlamaanka Laughter (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 19, 2016 08: 41 No Comments
Markii hooyada Madaxweyne Mamane ay timaado Le Parlement Du Rire, waa kan keliya ee aan qoslin mana ahan MICHEL GOHOU OFFICIEL iyo Digbeu Cravate oo dhihi doona kan ka soo horjeeda Akhri wax dheeraad ah